Munamato weSerenity Yakazara. ? Runyararo uye Doro
Serenity Munamato Inonyorerwa Reinhold Niebuhr aive muzivi weAmerica, mudzidzi wezvechitendero, uye munyori.
Munamato uyu wakazozivikanwa zvikuru chete madimikira avo ekutanga, une mavambo muHondo yechipiri yenyika kunyangwe nyaya dzinoenda pamunamato uyu zvimwe zvakasiyana, chokwadi ndechekuti, semunamato wese, une simba uye unobatsira munhu wese Avo vanobvunza mumunamato vachitenda kuti izvo zvatinokumbira zvichapihwa.
Chero inyaya yechokwadi yakaratidza kutanga kwemashoko emunamato, tinotenda kuti nanhasi zvinobatsira zvikuru kune vese vanotenda uye vanozviti kutenda kwechiKatorike.
Zvombo zveMweya zvakapihwa kwatiri kuti tizviite uye hazvisi zvekufunga asi kuita, kunyengetera uye kutenda kuti Mwari vanozorora.
1 Munamato wehunyoro Chii chinangwa?
1.1 Munamato wekunyarara kwakazara
1.2 Serenity munamato San Francisco de Asís
1.3 Serenity uye rugare runyararo
1.4 Serenity Munamato Wechidhakwa Chisingazivikanwe: Mapisarema 62
Munamato wehunyoro Chii chinangwa?
Serenity ndiyo mamiriro ekugadzikana akazara ayo anopfuura nekure uye kutya kwakanyanyisa.
Hatigone kutaura kuti isu pachedu kana mukati medu tinoshuva kuona shanduko dzatinofungidzira kuti ndedzechokwadi.
Icho hachisi chokwadi runyararo asi mamiriro ehunyengeri maakawanda isu patinowira zvisiri izvo tichiedza kubhadhara icho chatisina.
Nyika yerunyararo yakakwana uye kuvimba muna mwari izvo zvinotibvumidza isu kuti tirambe tichitenda maari kunyangwe tichiona zvatinoona. Kudzikama muna Mwari kunotitungamira kuti titende.
Iko hakuna nzira yekuve serene kana isu tisingatendi muna Mwari, rugare rwakakwana uye rwechokwadi runobva paruoko rweiye anotiziva kubva pakutanga kusvika kune ramangwana redu.
Munamato wekunyarara kwakazara
Mwari, ndipeiwo kudzikama kuti ndigamuchire zvinhu zvandisingakwanise kushandura, hushingi hwekuchinja zvinhu zvandinogona kushandura uye huchenjeri hwekuziva mutsauko; kurarama zuva rimwe chete panguva, kunakidzwa kwechinguvana panguva; kubvuma matambudziko senzira yerunyararo; kubvunza, sezvakaita Mwari, munyika ino yezvivi sezvazviri, uye kwete sekuda kwangu kutenda kuti Unozoita kuti zvinhu zvese zvive zvakanaka kana ndikazvipa kune wangu kuda kwako. kuitira kuti ndigone kufara mune ino hupenyu uye nekufara ndinemi mune inotevera.
Tora mukana wesimba rekunyarara rakazara munamato.
Kugadzikana munguva dzino uko kuve nekukasira kwehupenyu hwezuva nezuva zvinoita sekutidya isu irombo ratinofanira kurwira kuti tirichengetedze.
Tinogona kuiswa nemamiriro ezvinhu isu kuda kuba rugare, zvinogadzirisa mwoyo, kune izvo zviitiko kune munamato wakasarudzika wekugadzikana kwakazara.
Izvo zvakakosha kuti tizive kuti Mwari haaite pakati nepakati uye kuti zvingave kuti izvozvi hatisi kuona chishamiso chapedzwa nenzira imwechete isu tinofanirwa kuramba tichivimba naMwari kuti anoziva uye panguva ipi yaachazotamisa zvidimbu zvacho patiri.
Serenity munamato San Francisco de Asís
Ishe, ndiitirei chimbo cherunyararo: ipo paine ruvengo, ini ndinoisa rudo, pane kukanganisa, ndakaisa ruregerero, pane gakava, ndakaisa mubatanidzwa, pane kukanganisa, ndakaisa chokwadi, pane kusahadzika, ndakaisa rutendo, apo pane kupererwa, ndinoisa tariro, pane rima, ndakaisa chiedza, pane kusuwa, ndakaisa mufaro.
Nhai Tenzi, dai ndisina kutsvaga zvakanyanya kuti ndinyaradzwe sekunyaradza, kunzwisisika sekunzwisisa, kudiwa sekuda.
Nekuti kupa kunogashirwa, kukanganwa kunowanikwa, kukanganwira kukanganwirwa, uye kufa kunosimuka kuupenyu hwusingaperi.
Saint Francis weAssisi mumwe wevatsvene inodiwa nekereke yeKatorike sezvo chiri chishandiso chaMwari kukomborera hupenyu hwakawanda nemhuri dzese.
Iye anozivikanwa kuva nyanzvi mumatambudziko akaoma, mune avo vanoita kunge vanoba rugare rwedu. Kufamba kwake pano pasi kwaive kuzviisa pasi, nguva dzose aine moyo ununurwa uye unonzwa kune inzwi raMwari.
Anobvunzwa, pakati pezvimwe zvinhu, kutizadza negutsikano, kuti atipe kugona kuona chaiko uye kuramba tichivimba, kuramba tichitenda muzvishamiso.
Kugara nerunyararo uye kugadzikana kwakasimba nekuti kune mumwe munhu ane simba anonditarisira nemhuri yangu neshamwari chero nguva.
Iwo unofanirwa kuve munamato wedu, munamato wedu wezuva nezuva uye zvisinei nekuti zvinhu zvese zvakashata sei, ngatichengetedzei moyo wakasimba kubva pasi uye titende kuti Mwari anotibatsira nguva dzese.
Serenity uye rugare runyararo
Baba Vekudenga, Mwari ane rudo uye ane mutsa, Baba vedu vakanaka, tsitsi dzenyu hadziperi, Ishe ndinemi ndine zvese zvandinoda, nemi nerutivi rwangu Ini ndakasimba uye ndinonzwa kuperekedzwa, saka ndinokumbira kuti muve muridzi weedu Imba, yehupenyu hwedu uye nemoyo yedu, inogara uye inotonga Baba Vatsvene pakati pedu uye kugadzikana kwemanzwiro edu nemweya yedu.
Me ……. Nekuvimba kwakazara mauri uye nekuvimbika kwemwana anoda Baba vake, ndinokukumbirisa kuti utambanudzire nyasha dzako nekuropafadza pamusoro pedu, ufashukire kuva kwedu nerunyararo nerunyararo, tarisa zviroto zvedu, famba nesu usiku, tarisa nhanho dzedu , titungamirei mukati mezuva, tipei hutano, runyararo, rudo, mubatanidzwa, mufaro, tiite kuti tizive kutendeka nekushamwaridzana kune mumwe nemumwe, kuti tinoramba takabatana murudo nekugutsa uye kuti mune ino imba rugare nerufaro izvo zvatinoshuvira.
Bvumidza Mhandara Yakarumbidzwa Maria, Amai veMwanakomana Wako akaropafadzwa uye naamai Vedu vane rudo, kuti vatiputise neCheano Yake Inodzivirira Yekodhi uye vatibatsire apo mutsauko unoparadzanisa uye kutishungurudza, bvumidza ruoko rwake runotapira uye runyoro kutitorera kure hurukuro uye kusangana, ngaamurega agare nesu uye kuti ave utiziro hwedu mukutarisana nenhamo.
Ishe tumai Mutumwa werunyararo kuimba ino, kutiunzira mufaro nekuwirirana kuitira kuti atakure Runyararo urwo Iwe wega unoziva kutipa uye kutibatsira mukuremerwa kwedu uye kusagadzikana, zvekuti, mukati medutu uye yezvinetso, tinogona kuve nekunzwisisa mumoyo nemifungo.
Ishe, titarisei nemufaro uye mutipe nyasha dzenyu uye mutikomborere, titumire rubatsiro rwenyu munguva dzino dzekusuwa uye gadzirisai matambudziko nekusiyana kwatinoita isu kuve nekukurumidza uye kwakanakira mhinduro, kunyanya ndinokumbira rupo rwenyu rusingaperi.
(bvunza nekuzvininipisa uye chivimbo chaunoda kuwana)
Usambotisiya isu nekuti tinokuda Iwe, kuti rudo rwako runobatsira, kururamisa kwako uye nesimba zvichatiperekedze uye tipe kudzikama panguva dzese; Hupo hwako huripo Titungamirire uye utiratidze nzira yakanakisa, dai kuwirirana kwako kuchinja isu kubva mukati mukati uye kutiita isu nani nevamwe, tibatsireiwo Tenzi, kuti nguva imwe neimwe yehupenyu hwedu, rudo nekutenda zvinosimba uye zvakakura uye Tipe izvo zvinotora kuitira kuti husiku hwese patinoenda kunorara tinoziva kukutenda nezvese zvawakatipa.
Regerera kutadza kwedu uye utipe isu kuti tirambe tichigara murunyararo rutsvene, dai tsime rerudo rwako ruchichengetedza, dai tariro yatinoisa mamuri ikasava pasina uye kuvimba kwedu kunogara kwakasimba mamuri.
Ndatenda baba Vokudenga.
Namata munamato wekunyarara nerunyararo nekutenda.
Mwari anogara achititarisira, ndosaka tichifanira kuvimba kuti ari kuita kuda kwake muhupenyu hwedu nguva dzese.
Tinofanira kunetseka nezve kugara tichifunga mupfungwa dzerunyararo, pfungwa inopa kugadzikana uye kuvimba.
Pfungwa inhandare yehondo iyo yatinowanzowira pasi kana tichiedza kuratidzika neimwe nzira. Iko hakusi kurerutsa mamiriro uye nekuita chero chinhu nekuti isu tiri kuvimba.
Ndokuita nekuchengetedza kwakazara, nekuvimba uye nerunyararo kunyange maziso angu achiona chimwe chinhu chandinoziva kuti Mwari, iye Musiki Baba vari kuita chimwe chinhu chakandinakira nguva dzese nekuti vanondida.
Serenity Munamato Wechidhakwa Chisingazivikanwe: Mapisarema 62
01 Kubva pamusarudziri. Mune chimiro cheIedutún. Pisarema raDhavhidhi.
02 MunaMwari oga munogara mweya wangu, nekuti ruponeso rwangu runobva kwaari.
Iye oga ndiye dombo rangu noMuponesi wangu, inhare yangu: handingazenguriri.
Muchatiza murume kusvikira rinhiko, kuti muputswe pasi sorusvingo runopa nzira kana rusvingo runoparadza?
Vanongofunga nezvokundidzingira pasi kubva kumusoro, uye vanofarira nhema: Nemuromo wavo vanorumbidza, nemwoyo yavo vanotuka.
Zorora chete muna Mwari, mweya wangu, nekuti ndiye tariro yangu;
Kubva kuna Mwari kunouya ruponeso rwangu nembiri yangu, iye idombo rangu rakasimba, Mwari ndiye utiziro hwangu.
Vanhu vake, vimbai naye, Ngaabudise moyo wake pamberi pake, Kuti Mwari ndiye utiziro hwedu.
10 Varume havazi chinhu chinopfuura mweya, ivo vanokudzwa vanotaridzika: vese pamwechete pachiyero vanogona kusimuka vakareruka kupfuura mweya.
11 Usavimba nekumanikidza, usarege kunyengera mukuba; uye kunyangwe pfuma yako ichikura, usavape moyo.
12 Mwari akataura chinhu chimwe, uye zvinhu zviviri zvandanzwa: «Mwari uyo ane simba
13 uye Ishe une nyasha. kuti unobhadhara mumwe nemumwe zvinoenderana nebasa rake ».
Kuvimbika kunoenzaniswa kugona kuramba wakadzikama mukati medutu, yekutenda uye kuziva kuti Mwari anotitarisira.
Munguva dzekuora mwoyo zvakakosha kuti tive nemunamato uyu mupfungwa uye kuti tinokwanisa kuzviita chero nguva.
Nzvimbo yakati kana nharaunda haina kudikanwa kuti tinamate uye ishoma kana tine mweya kana moyo wakaneta nekushaikwa kwekunyarara.
Mune iwo maamentos ayo atinofunga kuti ticharasikirwa nehungwaru, munamato unokwanisa kuchinja iyo nhoroondo yenzvimbo yedu, iwe unongofanira kutenda.
Usambokanganwa kuva nekutenda.
Tenda kuna Mwari nemasimba ake ese.
Tenda muna simba kubva pamunamato kusvika parunyararo zadzisa. Ipapo chete ndipo paachakunda nguva dzakaipa.